Fomba makiazy any Afrika sy ny diaspora azy - AFRIKHEPRI
Ny Kosmetika Halal any Afrika sy ny diaspora
Ity formulaire ity dia mamono ny aretina rehetra ary mamerina ny fahasalamana
Un Afrikana roa ao aminy ny silamo. Ela ny tsy niraharaha na tsy nampoizin'ireo goavambe ny indostrian'ny kosmetika, ny filan'ny hatsaràn'ny vehivavy silamo nandritra ny taona vitsivitsy dia nokendren'ny onja vaovao nika marika ary nitombo fahombiazana.
Araka ny filazan'ny Fihaonambe Iraisam-pirenena Ara-toekarena Islamika natao tao Dubai tamin'ny volana lasa teo, ny mpividy hoditra sy ny tsenan'ny mpitsabo miozolomana dia andrasana hitombo amin'ny 74% amin'ny 2020 ka hatramin'ny 80 miliara.
Sarintanin'ny tsena sarotra ny mamaritra.
Ny mponina silamo manerantany dia antsoina matetika hoe "fiaraha-monina iraisam-pirenena". Raha ny marina, dia marobe ireo antokom-pinoana sosialy sy kolontsaina, miaraka amin'ny tanjona ara-jeografika, foko ary kolontsaina samihafa. Ny isam-pianakaviana manan-danja indrindra: ny soatoavina (ary ny fampiharana) ny finoana silamo.
Ny Afrikana sy ny diaspora dia olona an-tapitrisany amin'ny finoana Miozolomana (mitazona na tsia). Ireo taranaka vaovao dia tena mahazo aina amin'ny tontolo maoderina, saingy mbola tena mahatoky amin'ny finoany izy ireo (na mihoatra noho ny an'ny ray aman-dreniny aza). Ny fikarakarana fifandanjana eo amin'ny fampiharana ny finoana, dia mety ho sarotra ho an'ny vehivavy Silamo sasany ny fampiasana hatsarana sy ny fankatoavana ny fiarahamoniny.
"Na dia tsy manaikitra aza ny molotrao dia mihinana tsara! "...
Ny teny hoe "halal" dia manondro ny zavatra rehetra avela amin'ny lalàna shariana, lalàna silamo. Tsy momba ny sakafo fotsiny izany, fa isika rehetra dia mieritreritra matetika, fa ny fahazarana ara-piainana ihany koa, "ny fitondrantena silamo". Ny fomba fanao silamo dia milaza fa tsy misy mihinana kisoa na alikaola. Raha miresaka momba ny vovoka ireo andininy ara-pinoana, ahoana ny fampiharana ireo vokatra ireo (na dia kely aza) eo amin'ny vatana? Izy io dia ny Institute for Standardization and Metrology an'ny firenena Islamika izay mamaritra ny torolàlana azo ampiharina avy amin'ny mpanamboatra sy mpivarotra ny makiazy halal, araka ny didy amam-pitsipika ara-pivavahana. Ankoatra ny lipostika sy ny toothpastes izay mifandray mivantana amin'ny vava, dia tsy misy na inona na inona hentitra loatra amin'ny vokatra fidiovana sy ny fitaovana fanao amin'ny hoditra.
Ny fanosehana ny foto-kevitra hatramin'ny farany, misy marika sasany namorona lolo vavy izay tsy misy kisoa (tavy na jelatina), tsy misy alikaola (na ny alikaola na ny alkaola) na ny famokarana bibikely (cochineal ho fanangonana pigment). Ireo marika ireo dia manasongadina ny mari-pamantarana Halal Authority Board, manondro maneran-tany momba ny fanamarinana.
Ny fampiroboroboana ny vehivavy Miozolomana, marobe (kely) dia tarihan'ireo vehivavy mpandraharaha avy amin'ny fiarahamonina Miozolomana, indrindra any ampielezana: Jamal (France), Samina Pure Make Up (UK), One Pure (Kanada) ), Shfee Halal Care (Holandey) ...
Afrika amin'ny roa haingana.
Any Afrika Avaratra, ny laharam-pahamehana dia iray amin'ireo laharam-pahamehana amin'ny ministera ara-toekarena (indrindra any Maraoka) izay maniry ny hanao ezaka rehetra mba hahafahan'ny orinasam-pambolena ao an-toerana hampivelatra sy hanondrana vokatra azo antoka ho an'ny orinasa any amin'ny faritra. tontolo manontolo.
Any Afrika atsimon'i Sahara, marobe ireo sakana lehibe roa. Etsy andaniny, tena liana amin'ny marika frantsay sy Amerikana. Etsy ankilany, ny fampiasana vokatra voajanahary sy ny fitaovana "an-trano" any amin'ny fireneny.
Vondrona lehibe "Islam-friendly".
Ao amin'ny 2012, Colgate-Palmolive dia nividy dopania diplaoma hozatra tsy misy jirinina. Manoloana ny fanamafisana ny mari-pamantarana sy ny fanovàna amin'ny endriny, ny marika mahazatra dia miankina amin'ny varotra ara-kolotsaina amin'ny vokatra: shampoos tena izy. Ny fampiroboroboana ny fampiroboroboana sy ny mozika orientalista, Unilever sy Henkel dia namokatra vokatra manokana ho an'ny fanondranana volo amin'ny vehivavy voababo. Ny vondrona Unilever sy ny marika Sunsilk dia namorona ny tsiranoka Shampoo Clean & Fresh, izay nofaritana manokana ho an'ny vehivavy mitafy ny voaly ary ny volo no tena simba noho ny fahasimbana sy ny tsy fahampian'ny rivotra. Henkel nanangana ny Gliss & Restore "ny kapilara voalohany indrindra ho an'ny volon'ala mihidy. Raha ny filohan'izao tontolo izao, L'Oréal, dia manambara izy fa "ny tsena ho an'ny kojakoja halal dia tsena izay hitodihantsika, tahaka ny hafa, noho ny faniriantsika hanandratra ny hatsarana".
Novaina voalohany www.panafricanbeauty.com
Inglot - O2M Halal - ny fantsika mifono rivotra - 619
tsy misy tahiry
tamin'ny 7 Jolay 2020 8:01 maraina
Tsy andramana amin'ny biby
Tsy misy: toluene, formaldehyde, dibutyl phthalate (DBP), camphor
11 ml / 0,37 Etazonia fl oz
O2 M Series - halal (fofonaina)
Ny tombontsoa azo avy amin'ny menaka emu amin'ny volo sy hoditra
Toerana: afrikanina afrikanina